Olee otú weghara na ndekọ Your iPhone ihuenyo
> Resource> iPhone> Capture na ndekọ Your iPhone ihuenyo
Bụrụ na ị nwere iPhone na-achọ ịkọrọ ihuenyo na PC gị na, karịsịa n'ihi na ihuenyo ndekọ nzube. Ka ihe atụ, ị chọrọ igosi ndị mmadụ a otú na-video nkuzi banyere iPhone ngwa, ebe a bụ ezigbo ngwọta ịchịkwa gị iPhone n'okpuru Windows. Nnọọ na-eso a ndu ime iPhone ihuenyo kpọọ.
Veency: VNC Server maka iPhone
DemoCreator: ihuenyo edekọ maka Windows
Ma eme ka n'aka gị iPhone e jailbroken.
Olee otú idekọ iPhone ihuenyo
1 Download na wụnye Veency na gị iPhone
2 Download na wụnye VNC ahịa
Download na wụnye VNC ahịa (iri TightVNC dị ka ihe atụ) na gị PC.
3 Run VNC onyenlereanya ma na-eme dị ka na-esonụ
Run VNC onyenlereanya na ọ ga-ajụ gị maka iji kọmputa ede gị iPhone adreesị IP. Ị nwere ike ịhụ na ọ na Ntọala WiFi. Pịa akara ngosi na gị họrọ WiFi Network gosipụta adreesị IP. Nkume ọzọ ntọala ka ndabere na pịa Jikọọ.
Mgbe ahụ azụ gị iPhone na ị ga-achọpụta a ime akara arịrịọ si VNC ahịa. Pịa Nabata na a ga-a VNC njikọ akara ngosi na n'elu-nri akuku na gị iPhone ihuenyo.
Ugbu a, ị pụrụ ịhụ gị iPhone ihuenyo na kọmputa gị. A ga-enwe obere mebere òké na ị pụrụ ịchịkwa gị iPhone na gị òké remotely. Lee ndị njikwa:
Left click: ihuenyo mmetụ, na-eduzikwa bọtịnụ mgbe na-akpụ akpụ dị ka swiping.
Middle click: mkpọchi button
Keyboard: keyboard ị pụrụ ime ka ngwa ngwa ederede dee na gị keyboard jiri ya tụnyere aka-dee.
3 Download na-agba ọsọ DemoCreator
Open iPhone ihuenyo edekọ DemoCreator, ma họrọ Ngwa ma bulie VNC ahịa na esiri-ala menu. Pịa Osote ma ị ga-ahụ a 3-2-1 ngụda ka ịmalite ndekọ gị na ihuenyo on iPhone.
Press F10 mgbe ị zuru ezu ka ịdekọ ihuenyo on iphone. Ịnwere ike ihuchalu gị video, dezie ya wuru na-video nchịkọta akụkọ ma ọ bụ na-ebipụta ya dị ka video mmepụta ma na-eso ya na YouTube ma ọ bụ gị blog.
Atụmatụ banyere iPhone ihuenyo kpọọ
Ebe ọ bụ na ime ihuenyo nkekọrịta na-adabere na WiFi na-adịghị achọ ka ọ bụla USB, eku ọnụego nke video bụ banyere 15 fps, otú ọ bụ ihe nta bit ike idekọ egwuregwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ screencast banyere otú iji ngwa ma ọ bụ ndị ọzọ onscreen eme nke achọ nta fps, Veency gbakwunyere DemoCreator ga-a ezigbo nhọrọ.
Ugbu a, ị nwere ike ghara ịtọ ọ bụla VNC paswọọdụ na Veency. Na iji gbanyụọ Veency, ị pụrụ nanị gbanyụọ WiFi ma ọ bụ nanị iwepụ usoro ihe omume.
Olee otú weghara na Record Android ihuenyo
iPhone atụgharịa brik Mgbe iOS 9 nkwalite, Olee idozi ya?
iPhone Nnọchi Parts: Ihe Ị Mkpa Ịmata
iPhone ihuenyo Nnọchi Nchọpụta nsogbu